सेलिब्रेटी Archives - नागरिक रैबार
चर्चित गायिका मेलिना राई विवाह बन्धनमा बाँधिने भएकी छन् । उनले एरेञ्जर तथा गिटारिस्ट सञ्जीव बराइलीसँग विवाह गर्न लागेकी हुन् । जसको जानकारी सामाजिक संजाल मार्फत उनले दिएकी छन् ।बराइलीसँगको एक तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उनले इन्गेज्मेन्ट भएको समेत जनाएकी छन् । मेलिनाको सञ्जीवसँग केही वर्षअघि नै इन्गेज्मेन्ट गरेको बताइन्छ । इन्गेज्मेन्ट गरेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै […]
जितुलाई दीपक-दीपाको टिमविना चल्नुपर्ने चुनौती
काठमाडौं । ‘मुन्द्रेको कमेडी शो’ नयाँ ढंगले शुरु गर्ने तयारीमा रहेका हास्य कलाकार जितु नेपालले चलचित्रको काम अघि बढाएका छन् । जितु र अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘ह्यारी कि प्यारी’को छायांकन शुरु भएको छ । जितुले यो चलचित्रको छायांकन शुरु गर्दैगर्दा दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलासँगको व्यावसायिक सहकार्य भने टुटेको छ […]
महानायक हमालको आवाजमा ‘मन बुढो भएन’ गीत रेकर्ड
काठमाडौं, १२ कात्तिक । नेपाली फिल्म बेग्लै पहिचान बनाउन सफल महानायक राजेश हमाल अब गायक पनि भएका छन् । महानायक हमालले आफ्नो आवाजमा पहिलो पटक अनामनगरस्थित वेभ स्टुडियोमा ‘मन बुढो भएन’ बोलको रोमाण्टिक थिममा रहेको गीत रेकर्ड गराएका हुन् । उक्त गीतमा संगितकार दीपक शर्माको शब्द तथा संगित र नरेन्द्र वियोगीको एरेन्ज रहेको गीतमा हमालसहित […]
बाइक लभर्स अनमोल
बजारमा आएका महंगा, सहज र आकर्षक बाइकमा लामो यात्रा गर्ने रहर धेरैलाई हुन्छ । यस्तै, रहर नायक अनमोल केसीलाई पनि छ । यसअर्थमा, अनमोल बाइक लभर्स हुन् । आज भन्दा १२ बर्ष अगाडि अनमोलले यमहा फेजर बाइक लिएका थिए । यो बाइक अनमोलसँग आज पनि छ । उनी भन्छन्–‘मलाई बाइक त बेच्नै मन लाग्दैनँ । […]
प्रकाश सपूतको ‘कुरा बुझ्न पर्च’दुई सातामै करोड क्लबमा
दुई साता अघि मात्रै सार्वजनिक तीज गीत ‘कुरा बुझ्न पर्च’युट्युब ट्रेन्डिङको निरन्तर शीर्ष स्थानमा रहँदै करोड क्लब प्रवेश गरेको छ। ‘प्रकाश सपुत’ युट्युब च्यानलबाट साउन अन्तिम साताको शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको उक्त गीतको म्युजिक भिडियोले शनिबारसम्म १ करोड ९९ हजार बढी ‘भ्युज’ बटुलिसकेको छ। गीतका सर्जक प्रकाश सपुतले भिडियो सार्वजनिक भएको दुई सातामै निरन्तर युट्युब ट्रेन्डिङको […]
संसारकै ठूलो पोर्न स्टार बन्न चाहन्थे शाहरुख खान!
अभिनेता साहरुख खान बलिउडमा धेरैले मन पराउने अभिनेता हुन्। उनी शिक्षित र अनुशासित अभिनेता मानिन्छन्। ज्ञानसँगै उनको ठट्टा गर्ने शैलीको धेरैले प्रशंसा गर्छन्, तर एक पटक उनले यस्तो बयान दिएका थिए जसले गर्दा उनको चरित्रमाथि नै प्रश्न गरिएको थियो। सन् २००९ मा गुरु अरिन्दम चौधरीको ‘डिस्कभर द डायमण्ड इन यु’ किताबको विमोचन गर्न शाहरुख दिल्ली […]
विवाह नगरि बच्चा जन्माउने नम्रताको चाहना !
केही अगाडि फिल्म क्षेत्रमा नेपोटिज्म रहेको धारणा राखेपछि विवादमा मुछिएकी अभिनेत्री नम्रता सापकोटा पछिल्लो समय फेरि चर्चामा छाएकी छन् । उनी अहिले विवाह नगरी बच्चा जन्माउने चाहना राखेर चर्चामा छाएकी हुन् । हालै एक टेलिभिजनका लागि उनले हालै दिएको अन्तर्वार्तामा उनले बिहे नगरि बच्चा जन्माउने चाहना रहेको बताएकी छिन् । सो क्रममा उनले विवाहभन्दा पनि […]
शिल्पा शेट्टीको तस्वीरले मच्चायो तहल्का
एजेन्सी, २८ असार । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आजभोली फिल्म ‘हंगामा २’ को प्रमोसनमा व्यस्त छिन्। उनले नयाँ–नयाँ तरिकाले फिल्मको प्रमोशन गरिरहेकी छिन् । अहिले उनका फोटोहरू धेरै भाइरल भइरहेका छन्। शिल्पा शेट्टीको ‘हंगामा २’ ओटीटी प्लेटफर्ममा रिलीज हुने भएको छ । शिल्पाले आफ्नै तरिकाले फिल्मको प्रमोशन गरिरहेकी छिन। उनले इन्स्टाग्राममा आकर्षक र बोल्ड […]
अभिनेत्री निशा घिमिरेको उपचार नर्भिक अस्पतालले निशुल्क गर्ने भएको छ । दुर्घटनामा परेर विगत तीन वर्षदेखि ओछ्यान परेकी घिमिरेको अस्पतालले बिहीबार उपचार समेत थालेको छ । समाचार माध्यमबाट निशाको अवस्था जानकारी पाएपछि नर्भिक अस्पतालकी प्रवन्ध निर्देशक मेघा चौधरीले घिमिरेको उद्धार गरेकी हुन् । नवजीवन परोपकार समाजका सञ्चालक दुर्गानाथ दाहालले घिमिरेको दर्दनाक अवस्थाको विषयमा फेसबुकमा समेत […]
नायिका प्रियंकाको आग्रह–‘पहिले चुनावमा भोट पाउन लायक काम गर्नुहोस्’
सामाजिक संजालमार्फत नायिका प्रियंका कार्कीले नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दै पहिले जनताको समस्या वुझ्न आग्रह गरेकी छिन् । उनले, यो समय चुनावको नभएर जनताको स्वास्थ्यमा ख्याल राख्ने रहेको उल्लेख गरेकी छिन् । प्रियंकाले लेखेकी छिन्–‘आखा खोलेर एक पटक नियालेर देशको स्थिती हेर्नुहोस् । अहिलेको समयमा देश र जनतालाई चुनाव चाहिदैन । यो अहिले प्राथमिकतामा पर्दैन । […]
लोकगायक मिलन लामाले दिए विपन्नलाई घर
चितवन – लोकगायक मिलन लामाले रत्ननगर नगरपालिका–९ लालपर्सामा विपन्न परिवारलाई पक्की घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेका छन् । लामाले अर्थाभावका कारण झुप्रोमा बस्न बाध्य एकल महिला मधु कुमाललाई पक्की घर बनाएर हस्तान्तरण गरेकी हुन् । घर निर्माणका क्रममा दुई तलाबाट खसेर श्रीमानको मृत्यु भएपछि मधु र उहाँका दुई छोरा लालपर्सास्थित कुमालटोलमा रहेको झुप्रोमा बस्दै आएकी […]
बाबुरामलाई करिश्माको कटाक्ष–‘यही हो नेपालीले पाएको गणतन्त्र’
नायिका करिश्मा मानन्धरले चलचित्र यात्रा सुस्ताउँदै गएपछि राजनीतिमा जाने निर्णय गरिन् । डाक्टर बाबुराम भट्टराइको नयाँ शक्ति पार्टीमा उनी आवद्ध भइन् । यसपछि करिश्मा सक्रिय रुपमा राजनीतिमा होमिएकी थिइन् । तर, बाबुरामको नयाँ शक्ति पार्टी र मधेदवासी दलहरुविच सहमती भयो र जनता समाजवादी पार्टी जन्मियो । यसपछि, करिश्माले राजनीतिमा सक्रिय रुपमा नलाग्ने निर्णय गरिन् । […]
बलिउड/हलिउड सलमान खान नेपाल नआउने